कुलमानलाई हटा’उने ओलीको षड्यन्त्रको पर्दाफास गरौं ,अब जागौं जनता हो -ज्वाला संग्रौला – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमानलाई हटा’उने ओलीको षड्यन्त्रको पर्दाफास गरौं ,अब जागौं जनता हो -ज्वाला संग्रौला
काठमाण्डौं। स’दैव सत्यको पक्षमा बोली रहने एक निडर नारी ज्वाला संग्रौला यतिबेला सर’कार बि’रुद्ध खनिए’की छिन् । कुलमानलाई हटा’एको समय भएकोले उनी नि’क्कै आक्रोशमा आ’एकी छिन् । संग्रौं’लाले प्र’धानमन्त्री ओलीलाई खुल्ला च्या’लेन्ज गर्दै भनेकी छि’न् “कुलमानलाई हटा’उने ओली’को षड्य’न्त्रको पर्दा’फास गरौं ,अब जागौं जन’ता हो।
संग्रौलाले आफ्नो सा’माजिक सं’जाल फेस्बुक’मा लेखे’को कुरा जस्ताको तस्तै पूरा पढ्नुहोस :
देशलाई उज्यालो दिएर जनताको मनमा ब’स्न सफल कुलमान घि’सिङलाई नेकपा सरकारले जसरी पनि सिध्याउन लागि परेको छ। आ’जभन्दा ठीक एक बर्ष अगाडि एकजना अम’नलाल मो’दी नाम गरेका ब्यक्तिलाई हतियार बनाएर कुल’मानले बि’धुत प्रा’धिकरणमा ९ अर्ब भ्रस्टचार गरेको भनि प्रहा’र गर्न लगा’ए।
त्यसपछि कुल’मानले मि’डिया सँ’ग भ्रस्ट’चार गरेको एक प्र’माण अमन’लालले दियो भने म झुण्डिएर मर्छु भनेर सीधै प्रतिक्रिया दिएपछि जनताले उन’लाई झन् मन परा’ए भने यता ने’कपा भित्र अब खा’न नपाईने भो , भ्रस्ट’चार गर्न नपाईने भो भनेर ठुलै को’लाहल म’च्चियो।
त्यसपछि केपी ओ’लीले कुल’मानलाई मिडि’याबाजी गरेर जनताको न’जरमा हि’रो बन्न खो’जेको आ’रोप पट’क पट’क लगाए। जब’की कुलमान आफै मिडि’याबाट कोसौं टा’ढा रहने मा’न्छे हुन् भने फ़े’सबुक पनि एकदमै पा’तलो चला’उँछन्। उनी काम ब’ढि र कुरा क’म गर्ने इमा’नदार मानिस हुन् यो कुरा सब जन’तालाई थाहा छ र यी भ्रस्टे’हरुलाइ पनि थाहा छ ।
तर यी भ्र’स्टे भरौटे हरुलाई देश अन्ध’कारमा डु’बोस् कि कोहि भोकै मरोस् यो सब म’तलब छैन ! ख़ा’ली सत्ता र भत्ता’को मात्र लो’भ छ ! कस’री हुन्छ राम्रो’लाई सि’ध्याएर भ्रस्ट भर्ती गर्नु छ र मि’लेर मुलु’क लु’ट्नु छ ! हि’जोको बैठक नि’स्कर्षबिहीन ब’नाएका ओ’लीले अब के ग’र्छन् म भन्छु नि :-
अब ओ’लीले कुल’मानलाई यतिकै झु’लाउँछन् र जनता’लाई का’नुनी प्रो’सेसका उखा’न टु’क्का सुना’एर केहि दिन भु’लाउँछन्। त्यस’पछि कु’लमानको रि’क्त पद’मा तल्लो दर्जा’को ज’ता फ’र्कायो उतै फ’र्कने मु’र्ती जस्तो ल’ठैतलाई नि’मित्त कार्यका’री बनाउँछन्। त्य’सपछि जब यो बि’रोध र आ’वेगको मा’हौल सा’न्त हुँदै जान्छ, उनले आफ्नो आसे’पासेलाई ट’पक्क टिपेर कुल’मानको ठाउँमा भ’र्ती गर्छन् !
य’सरी ओ’ली एण्ड कम्प’नी सर’कारले दिनद’हाडै एउटा रास्ट्र’को ज्यो’ति नि’भाउँछ र कुल’मानको क’थालाई यतिकै बिट मा’र्छ , उनको यो’गदान , इमा’नदारिता र स्वच्छ छबि’लाई किना’रा लगाउँछ र आफू जन’ताको आँखाको उज्या’लोमाथी माफि’याहरुसँग मिलेर नाङ्गै ना’च्छ अनि नाग’रिकले ति’रेको कर’माथी सरे’आम बला’त्कार गर्छ ! मैले देखेको स’त्य यहि नै हो !
तर यसो हु’नु अगा’वै हामीले के’हि रास्ट्रघा’तीहरुको घरमा ब’म फु’टाल्नु प’र्छ अनि बल्ल काबु’मा आउँछन् र कुल’मानलाई फेरि मन नला’गी न’लागी दोहोर्याउँछन्। म हत्या हिंसामा बिस्वा’स गर्दिन , तर यदि कुनै गद्दार देश बिकासको बाध’क बन्छ भने त्य’स्लाई इन्का’उन्टर गर्नु’पर्छ भन्ने मे’रो सोच छ। बि’प्लब दाई तिमी क’हाँ छौ?
अब जनता’को सम्पर्कमा आऊ! गरिब हरु’लाई न’छोऊ तर सामन्ती , हे’पाहा र अवसरबादी खल’पात्रहरुको कन्चट ताकि ताकि ट्रि’गर दबाऊ..! Enough is Enough ! #सुन_सरकार 😡जनचेतना’को लागि यो पोस्ट ब्यापक सेयर गरौँ साथीहरु !
अन्टसन्ट का’रण देखाई कुलमा’नलाई पाखा लगाईयो भने यो सरा’सर रास्ट्रघात हुनेछ , यो सरा’सर ग़’द्दारी हुनेछ ।
काठमाण्डौं ।सा’माजिक अभि’यानता ज्वा’ला संग्रौलाले कुलमानको पक्षमा बो’ल्दै तपाईंले गलत निर्णय गर्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तत्काल छो’ड्नुस भनेर केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दि’एकी छिन् । उनी भन्छिन: जनताले चाहेको हर मान्छेलाई हटाउने प्र’यास गर्नु सरकारले पतनको पद रोज्नु हो।
संग्रौलाले आँफ्नो सामाजिक सं’जाल फेस्बुक मार्फत यसरी ले’खीकी छिन :
‘सम्मा’ननीय प्रधानमंत्री केपी ओली ज्यु, सारा जनताको चाहना बिपरित गएर कु’लमानको बि’पक्षमा कदम चाल्नु भो भने तपाई जनताको प्र’धानमन्त्री भन्न लायक रहनु हुने छैन ! देशको प्रधान’मन्त्रीले त कुल’मान जस्तो इमा’नदार ब्यक्ति पाएर गर्व गर्नुपर्ने हैन र?
देशलाई उज्या’लो बनाउनु पर्छ भ’नेर लागिपरेको मान्छेलाई मन नपराउने तपा’ईलाई यो देशको प्रधा’नमन्त्रीको कुर्सी ओगटेर बस्ने कुनै अधिकार छैन ।यदि कथं कदाचित् अन्टसन्ट का’रण देखाई कुलमा’नलाई पाखा लगाईयो भने यो सरा’सर रास्ट्रघात हुनेछ , यो सरा’सर ग़’द्दारी हुनेछ ।
चाँडो कुलमानलाई सि’फारिस गर्नुस ! नत्र फेरि अनर्थ होला! ६२/६३ सालको जनआन्दोलनले सर्बशक्तिशालि रोयलिस्टहरु पल्टा’ईदिएको सा’यद तपाईले भुल्नु भा छैन होला ..! जनतालाई कम’जोर नठान्नुस। तपाँईलाई ब’नाउने पनि जनता नै हुन्। बनाउ’नेले बि’गार्न पनि जानेको हुन्छ , याद र’होस् ! #म_बोल्छु_कुलमानको_पक्षमा “✊️
यो पनी पढ्नुहोस :
ज्वाला संग्रौला भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई पाखा लगाउने वि’रुद्ध आ’न्दोलन गरौँ, ग’द्दारहरुको सारा सम्पति ज’फत गरौँ…हेर्नुहोस्।
तत्का’लीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले घिसिङलाई चिलिमे जल’विद्युत् कम्पनीको प्रब’न्ध स’ञ्चालक हुँदा काम सन्तो’षजनक नभएको भन्दै प्राधिकरण केन्द्री’य कार्यालयमा तानेकी थिइन् । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री बनेको जनार्दन शर्माले घिसिङलाई कार्य’कारी प्रमुखमा नि’युक्त गर्न प्रस्ता’व गरेको थिए।
“उज्यालो नेपालका अभि’यन्ता कुलमान घिसिङलाई अन्तत: भ्रस्ट’हरुले पाखा लगाउने नै ष’ड्यन्त्र रचि”सकेछन् ! अब ससक्त सडक आन्दो’लनको तयारी गर्नु पर्छ ! अनि कुलमानलाई ह’टाउन लबि’ङ गर्ने रास्ट्र’घाती ग’द्दारहरुको सारा सम्पति जफत गरेर भोका जनतालाई बाँड्नु पर्छ। enough is enough ”,फेसबुकमा उनी लेख्छिन्।